Olympe de Gouges kunye namaLungelo eMfazi
Imbali kunye neNkcubeko Imithetho kunye namalungelo amabhinqa
by UJone Johnson Lewis
Amalungelo Amabhinqa kwiNguqulelo yesiFrentshi
Ukususela kwiNguqulelo yesiFrentshi kunye ne "Isibhengezo samaLungelo eNdoda kunye neNkcubeko" ngo-1789, de kube ngo-1944, ubukumkani baseFransi babuncitshiswe kubadoda - nangona abafazi bebenokusebenza kwiNguqulelo yesiFrentshi, kwaye abaninzi babecinga ukuba ubemi bobabo ngokubambisana nokuthatha inxaxheba ekusebenziseni kuloo nto yokulwa.
U-Olympe de Gouges, umdlali odlala umdlalo othile eFransi ngexesha le-Revolution, wayengathethi yena kuphela kodwa uninzi lwabafazi baseFransi , ngo-1791 wabhala waza washicilela "Isibhengezo samaLungelo eNkosikazi kunye neSizwe . " Ukulungiswa kwi-1789 "Isibhengezo samaLungelo omntu kunye neSizwe" kwiNdibano yesiZwe , i-de Gouges 'Declaration yavakalisa ulwimi olufanayo kwaye yandisa nakwabesetyhini.
Abaninzi abasetyhini baye benza oko, i-de-Gouges zombini yatsho ikhono lomfazi ukuba liqiqe kwaye lenze izigqibo zokuziphatha, kwaye libhekiselele kwiimpawu zentombi zengqondo kunye nevakalelo. Umfazi wayengenjalo nje ngomntu, kodwa yena wayelingane naye.
Iinguqulelo zesiFrentshi zezihloko zezibhengezo zombini zenza oku kubonakala ngokucacileyo. NgesiFrentshi, u-Gouges 'manifesto yi-"Declaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne" - kungekhona nje uMfazi ochasene noMntu , kodwa uCitoyenne wayefani noCitoyen .
Ngelishwa, u-de Gouges wacinga kakhulu. Wayecinga ukuba unelungelo lokusebenza njengelungu loluntu kwaye aqinisekise amalungelo abantu ngabasetyhini ngokubhala umbhengezo onjalo. Uphule imida ininzi yeenkokeli zenguqu ezifuna ukugcina.
Phakathi kwemingeni e-Gouges 'Declaration yayikukuqinisekisa ukuba abafazi, njengabahlali, banelungelo lokuthetha inkululeko, ngoko ke banelungelo lokutyhila ubani booyise babo abantwana - ilungelo abanamabhinqa belo xesha kuthathwa ukuba.
Wacinga ilungelo labantwana abazalwa ngaphandle komtshato osemthethweni ukulingana okupheleleyo kwabo bazalwa emtshatweni: oku kwabangela umbuzo ukuba amadoda kuphela anelungelo lokunelisa umnqweno wabo wesini ngaphandle komtshato, kwaye inkululeko inxalenye yabantu inokusetyenziswa ngaphandle kokwesaba uxanduva oluhambelanayo.
Kwakhona kwakubangelwa ukuba i-assumption yokuba ngabafazi kuphela bezithunywa ze-reproduction-amadoda, kunye nesiphakamiso sikaGouges, sasiyinxalenye yokuveliswa koluntu, kwaye kungekhona nje ezopolitiko, abemi abanengqiqo. Ukuba abantu babonwa babelana indima yokuvelisa, mhlawumbi, a mabhinqa kufuneka abe ngamalungu ommandla wezopolitiko noluntu kuluntu.
Ukuqinisekisa ukulingana, nokuphindaphinda ukubhengezwa esidlangalaleni - ngenxa yokwenqaba ukuthula ngoLungelo loMfazi - kunye nokudibanisa nelinye icala, i-Girondists, nokugxeka amaJacins, njengoko i-Revolution yaqalisa ukungquzulana - U-Olympe de Gouges wabanjwa ngoJulayi ka-1793, iminyaka emine emva kokuqalisa kweNguquko. Wathunyelwa kwi-guillotine ngoNovemba waloo nyaka.
Ingxelo yokufa kwakhe ngelo xesha yathi:
U-Olympe de Gouges, ozalelwa ngcamango ephakamileyo, wayiphathisa indlovu yakhe ngenxa yokuphefumlelwa kwendalo. Wayefuna ukuba ngumntu welizwe. Wathatha iiprojekthi zabantu abakhohlisayo abafuna ukwahlula iFransi. Kubonakala sengathi umthetho ujezise lo mqambi ngenxa yokulibala izinto ezintle zesini.
Phakathi kwe-Revolution yokwandisa amalungelo kumadoda amaninzi, u-Olympe de Gouges wayenobungqina bokuthi abafazi, nabo, kufuneka bazuze.
Abantu bexesha lakhe babecacile ukuba isigwebo sakhe sasiyinxalenye yokulibala indawo yakhe efanele kunye nendima efanelekileyo njengowesifazane.
Kwi-manifesto yakhe yokuqala, iCandelo X libandakanya inkcazo ethi "Umfazi unelungelo lokukhupha i-scaffold. Wanikwa ukulingana kokuqala, kodwa kungekhona okwesibini.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa ngo-Olympe de Gouges kunye nemvakalelo yesibini yaseFransi, ndincoma iincwadi ezilandelayo:
Kuphela okuphazamisayo ukunikezela: Abafazi baseFransi kunye namalungelo abantu. UJoan Wallach Scott. I-Hardcover (kwakhona kwiphepha lephepha); Ngo-1996. Ukunyangwa ngokugqithiseleyo kuka-Olympe de Gouges kwiNguqulelo yesiFrentshi, uJeanne Deroin kwi-Revolution ka-1848, uHubertine Auclert kunye neRiphabhlikhi yesithathu, uMadeleine Pelletier ngasekuqaleni kwekhulu lama-20, kunye nabafazi baseFransi emva kokuphumelela ivoti ngo-1944.
Imbali Yabasetyhini I-Vol 4: Ukuvela Kwabesifazane abavela kwi-Revolution ukuya kwiMfazwe Yehlabathi. UGenevieve Fraisse no-Michelle Perrot, abahleli. Le nguqulelo yembali yaseYurophu yamabhinqa iqala ngeNguqulelo yesiFrentshi ekusunguleni ixesha langoku.
Kwimimandla: Abafazi kunye nezoPolitiko kwiNgqungquthela yaseFransi 1789-95 . Shirley Elson Roessler. Unyango lwabaninzi besifazane abadibene neNguqulelo yesiFrentshi.
Magna Carta kunye nabasetyhini
I-League yoLuntu yeNyunyana yoRhwebo -WTUL
Amakhosikazi eMzantsi siseko we-US: Ulwahlulo loSondo
Isembozo: Abafazi abangekho phantsi koMthetho
Ziziphi iiMerika eziye zazalisa i-ERA kwaye Ziye zizaliseka nini?
Amalungelo amaTyhini kunye noLungiso lweshumi elinesine
Amazwe Angenabafazi kwiNgqungquthela
Umthetho woSalic kunye neNtombi yamaNtloko
Joan waseArc Picture Gallery
Yintoni e-Hiking My Emergency Kit
I-GRAHAM - Igama lomxholo kunye nomthombo
Iintlobo ezahlukeneyo zeebhayisikili ezithintelayo kwi-Beat of Their Own Drum
Kutheni sifunda isiFrentshi
I-13 e-Historical Myths Debunked
Sebenzisa iMedia Media ukuze ufundise i-Ethos, i-Pathos ne-Logos
37 Imimangaliso kaYesu
Ngaba Unokuvula Intambo Yomlilo Ngomnxeba?
Ulwazi oluSiseko malunga neNdabuko yeHajj yamaSilamsi
Ukuphazamiseka ngokubanzi kweeNkonzo zabasebenzi beSikolo
Yintoni igama leCovalent Compound CCl4?
Yintoni enokuyilindela kwiQela lokuQala iSikhuphelo se-Ice Skating for Kids
"Isijikelezo sangaphakathi" soLwimi lweNgesi
22 causas de negación de ingreso e-Estados Unidos por inadmisibilidad
Imbali yeenqwelo: Ngubani ohlasele iloli?
Ngaba "kuyadingeka ukuba" Kufuneka i-Subjunctive?
Iinqununu eziphezulu kwiKharityhulam yeeKhaya zaseKhaya
Nika iiPhepha zokuSebenza eziPheleleyo
Iimpawu zePolitiki eziMnandi kunye neClass One-Liners
Qalisa kwi-Pastel Yakho Imifanekiso kunye neLuhlu lweZiko loPhulo lwe-Pastel
Gandhi kuThixo noNqulo: ii-Quotes
I-Pre-Trial Motions Stage yoLwaphulo-mthetho
Indlu yokuqala - IiNdlu zeenkwenkwezi
I Piano Vs. Ikhibhodi